Mitambo / Applications / Mighty Craft yeWEB / IoT Kuchengetedza - Siya iyo kana kukura kwemitambo, zvidzidzo, WEB system, IOT kukura uye kushanda!
WEB system / application / IoT senjodzi yekuvandudza
VR kushandiswa kushandiswa · kugutsikana kwekugadzira basa
Mashoko ekupedzisira pamusoro peMighty Craft
[Dhinda rekubudiswa] Super Real Mahjong P8 yakabudiswa
Takabudisa kutengesa fax yekushandisa
Tichakutsigira kuti ubatane neshare yekugadzirisa iyo isingatsigiri TLS 1.2
Dragon Dragon Shogi Online (Futurephone compatible) basa richagumiswa
Icho basa reMasimba Craft
Kubva ku-smartphone applications (iPhone / Android), mitambo yemagariro evanhu nemitambo yevatengi, tapota shingairira kusanganisa kusanganisira hurongwa hwepurojekiti, hurongwa hwehutachiona, kusimbiswa kwekushanda, kutongwa kwechiitiko Tinopa purogiramu yehutano yepurogiramu yedu yedu yakashambadzira. Isu tinopawo mitambo kune mamwe mahotera emabasa ekumahombekombe, tapota tibvunzei isu kuti tive kune imwe nyika kune imwe nyika.
Tinopa imwe stop stop service kubva kurongwa ~ kugadzira ~ production ~ operation ~ update Tichapindura nekukurumidza kwekupindura kuburikidza nekugadzirwa kwemukati pamwe nekugadzirwa nekushanda maererano nekukura kwenzvimbo inoenderana neseri yegore. Tine nhamba yezvinyorwa zvemafoni akawanda e-smartphone, HTML applications, SNS game development, PC site site kuvaka, cloud construction uye operation.We tinogona kutakura load countermeasure, dambudziko rekuongorora / tsamba, sarudzo relocation, etc. Ndapota bvunzei semumwe wekambani yenyu nenzira dzose. Tine zvakawanda zvakawanikwa zvewebhu web application yebhizimisi!
Tichagadzirisa zvisikwa zveVR zvinyorwa, sumo yeVR varaidzo, nezvimwewo.
Kubva kuMightyCraft iyo yakanaka pakushambadzira kwevanhu, mutambo mutsva unotarisa kushandiswa kusinganzwisisiki, teknolojia yekuratidzira app inowanikwa! Kana ichiita sechinakidza kunyange nemikana shoma iyo ichaiumba! Sezvo nzvimbo yekuwana tekoroti ine simba "Mighty Craft" nerutendo, ndicharamba ndichirwira kubva "owl studio" mune ramangwana!
Tichazotaurira zvimwe zvezvibereko zvedu. Iko kune mapurogiramu anopfuura mazana mana ekushandurwa uye nzvimbo dzinopfuura makumi mashanu dzehutano hwewebhu.
Mobile zviri mukati
Dhiragoni ari kukwira kwepamberi
Bhuku reMighty Craft technician
Ita bhokisi muChatwork (1) - webhook ne php
Iwe unogona kushandisa webhook yeChatwork API / Kana iwe une webhook unogona kubata Chatwork / Using webhook Preconfiguration / Simba dhesi rakatumirwa nebhuhook ne PHP[...]
Flets speed reduction muSapporo uye DS-Lite (IPv6 IPoE)
Muhofisi yeSapporo, NTT 's optical fiber line FLET' s slow reduction yaive dambudziko. Mhando yeFLET'S apartment type 100 Mbps type. Mumasikati hazvina hanya nazvo, asi kuderedzwa nekukurumidza mushure manheru manheru kune basa zvichienderana nezuva[...]
Ikozvino huwandu hwehuwandu hwemasvikiro huri kukwirira, pane kutsika mutengo. Zvichienzaniswa nesangano rekuchengetedza uye yekuchengetedza mifananidzo makore akawanda akapfuura, mutengo unowanzowanzo simba uye mutengo uri chikamu. Panguva ino, ndakanyora Linux yose diski mumutambo mukuru wekutya[...]
Dzorera Cygwin paWindows XP ikozvino
Icho chiitiko cheWanna Cry ye rudzikinuro rwetachiona virus (Ransomware), uye yakaratidzwa kuti Windows XP ichiri kushanda munyika yose. Kunyange zvazvo Microsoft inofanira kunge isingabatsiri, Microsoft inogadzirisawo. Hongu, ini[...]
Connect Yamaha NVR 500 kusvika SIP mutengi we Hikari Denwa
Ndiyo N yeTokory head office. Ndakaedza kubatanidza router ya "Yamaha NVR 500" seSIP muteereri we "Hikari Denwa router" PR - S300NE ". Mushure ndewe "Hikari Denwa router" NTT yakanga yakamisa "PR - S300NE". Hand[...]
VR nzvimbo yekutevera ne smartphone
Iko Z yehofisi yeSapporo. Nzvimbo yekutsvaga yakave yakazadzirwa nemagetsi efoni sechikamu chekuongorora kwemukati. Chinhu chandinofanira kuita ndechokuona nzvimbo yekufambisa yakafanana nekufamba uye kuibatanidza muchikwangwani cheVR (chaiyo chaiye) mamiriro. Nefoni yega yega,[...]
Kuvandudza mitemo haisi kuenderana neWindows 10
Ndiyo N yeTokory head office. Nguva yekuvandudza nguva kusvika Windows 10 yakarongerwa kuva musi waJuly 29, saka kugadzirwa kwemukati kunowedzera. Windows 10 inoiswa sequentially pamashandisi asina kushandiswa, asi Windows 10 haina kubvumirana[...]
DB horizontal split kutsigira ne FuelPHP
Ndiyo K yehofisi yeSapporo. Nenzira, kusikwa kwesangano remamiriro ezvinhu (LAMP mumamiriro ezvinhu) kwakarongerwa pakuvandudzirwa kwaro, asi mumakore achangopfuura akawanda uye akawanda akazarura zvigadziriro zvekushandisa zviri kushandiswa. Nheyo yedu yegawo haisi yakaipa[...]
Zvamusingagoni kuita neUnited WebGL
Ndiyo G wehofisi huru yekuTokyo. Yakange yakapoteredza kwemazuva mazhinji kubva Kubatana kunowirirana neWebGL, asi inoratidzika kunge iri zvisinganzwisisiki zveJapan nezvehuwandu hweWebGL nhasi. Nhasi iri mumutero wandakaita, asi Unity WebG[...]
Gadzira 3D mufananidzo kubva mufananidzo ne 123D kubata uye kuratidzira neUbatanidzwa
Ndiyo O wehofisi yeSapporo. Ndakasarudza 3D mienzaniso kushandisa AutoDesk 123D Catch uye ndakaedza kuratidza kufamba neUnited. 123D Catch is an application inokubvumira iwe kuti uite demo yeDesign model kubva kumifananidzo[...]
Musoro: 〒 171 - 0022
MI Kuvaka 3F 2-8-5 Minami Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo